Fampitandremana: Aza mihinana ireo sakafo ireo alohan'ny nandritry ny sidina manaraka
Ny sakafo ratsy indrindra alohan'ny handosirana
Ny fitsangatsoana androany dia sarotra nefa tsy mahatsiaro marary rehefa manidina. Vitsy dia vitsy ny sakafo azo avy amin'ny sakafo, ny mpandeha dia nianatra nitondra ny sakafony manokana mba hialana amin'ny hanoanana nandritra ny dia. Raha mieritreritra ianao fa sasantsasany amin'ny sangisangotrao amin'ny sombin-tsakafo sy ny sakafo dia mahasalama anao hahafantatra fa mety ho nitondra sakafo ratsy teo amin'ny sidina ianao, araka ny voalazan'ny mpitsabo iray.
Kate Scarlata dia mpitsabo biby sy mpitsabo nentim-paharazana avy any Boston ary manana mpanoratra manana ny varotra ao New York Times izay manana traikefa mihoatra ny 25 taona. Fantany ny fiantraikan'ny sakafo sasany sotroin'ny mpandeha izay azo alaina mialoha sy mandritra ny sidina.
"Ny faritra midadasika dia fahasalamana ho an'ny alikaola. Efa ho ny 20 isan-jaton'ny mponina any Etazonia no sendra ny tsimokaretin'ny tsinay, ary mety ho sarotra izany rehefa mandeha, "hoy i Scarlata. "Amin'ny ankapobeny anefa, tsy tian'ny olona ny miaina toe-pahasalamana, fa rehefa mandeha izy ireo. Mihamitombo ny fiaramanidina ao anaty fiaramanidina, ka raha vao mandany entona ianao, dia hiharatsy izany. Koa tokony hihinana sns izay hitazona izany amin'ny ala. "
Noho izany alohan'ny hidiranao an'io sidina manaraka io, jereo ny pikantsarin'i Scarlata, etsy ambany, noho ireo sakafo ratsy indrindra azonao ihinanana amin'io fiaramanidina io sy ny antony mahatonga azy ireo ho ratsy.
Ny proteinina solifara-vary
Ny tsy fahampian'ny sakafo toy ny proteinina, ny atody sy ny hena alohan'ny fiaramanidina dia tsy hevitra tsara satria mikarakara mikraoba izay mamoaka gazy solifidin'ny rano, hoy i Scarlata. "Tokony ho telo na dimy ora eo ho eo alohan'ny hamokarana entona lafarina avy amin'ny sakafom-bokatrao ianao, ka raha hikapoka mandritra ny adiny iray mandeha amin'ny sidina ianao, ny sakafo tokony hohaninao alohan'ny hidiranao ao anaty fiaramanidina na ny eo amin'ny fiaramanidina dia tokony ho tsara" hoy izy. "Mety hanampy anefa ny fandaharam-potoana rehefa manidina ianao."
Ny voanjo, anisan'izany ny almonds, cashews, chestnuts, flaxseed, hazolazo ary pistachios, dia manankarena amin'ny fibper fermentable, izay fomba mahomby ho an'ny entona entina, hoy i Scarlata. "Mivarotena ny mikraoba ao an-trano ireo fibre ary ireo sakafo ireo dia mahasalama ny ankamaroan'ny olona, ​​ka afaka miteraka gazy mampidi-doza eo amin'ny toeranao", hoy izy. "Ny olana goavana dia ny fitomboan'ny entona ao anaty tsinay isaky ny kilaometatra ambony ao anaty trano fisotroana."
Ny voankazo maina indrindra - indrindra amin'ny be dia be - manampy sorbitol sy fibre amin'ny tsinay, hoy i Scarlata. "Mampiakatra ny rano izany ary miteraka tsiranoka feno entona entona", hoy izy. Ny voankazo voajanahary koa dia mihamitombo kokoa noho ny siramamy sy ny kaloria, araka ity lahatsoratra ity ao amin'ny Tena Tsara.
Zava-manitra sy sira
Ireny sns ireny dia manankarena fisotroan-dronono toy ny mannitol, sorbitol ary xylitol, hoy i Scarlata. "Mety handingana haingana kokoa ny traikefa azo avy amin'ny vavan-tsakafo, noho ny fisotroana alikaola", ka miteraka ratra sy diaro. Tsy te hidina amin'ny sidina ianao - indrindra fa ny iray lava - miady amin'ny soritr'aretina.
Raha ity sakafo ity dia hevi-dehibe ao amin'ny sakafo ara-pahasalamana mediteraneana, azonao atao ny misaintsaina indroa toy ny dia misakafo, na dia mahasoa aza. "Fantatry ny besinimaro fa ny legioma, anisan'izany ny chickpeas (ampiasaina amin'ny hummus), ny voankazo maina, ny voankazo maina, ny soja ary ny lentils dia miteraka entona, zavatra izay mety tsy te hialanao any amin'ny kilaometatra avo lenta," hoy i Scarlata. Ity toro-làlana ity koa dia ampiharina amin'ny zavatra toy ny voanemba voaniho, hummus edamame ary dipoavatra mainty hoditra.
Granola Bars miaraka amin'ny Extract Root Chicory
Ny fototarazaka Chicory dia volo madinidinika ary mety hampiroborobo ny diany, hoy ny Scarlata, mijery ny endriky ny kitapo mialoha ny fividianana sy famenoana azy ireo. Ny barika maina miaraka amin'ny voany ary / na ny voankazo maina dia mety ho olana koa.
Ny Scarlata dia namorona fitsipika tsotra: ny tongolo sy ny tongolo lay dia mitovy amin'ny fivoahana entona. Io sakafo io koa dia mampiditra ny tsaramaso, izay tsy misy koa ny fiakarana ny antony mazava, ary ny tortilla chips, izay miezaka ny ho ambony ao amin'ny sodium ary miteraka lozoka. Ary ny sakafo matavy dia mety hiteraka vatana mangatsiaka sy vava mangatsiaka.
Mandritra ny sakafo matsiro, ireo sotro ireo dia matavy be sy sira ary tsy ampy sakafo, hoy i Scarlata. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny seranam-piaramanidina-ny sangodim-bitsika sy ny voanjo. "Ny vokatra azo avy amin'ny varimbazaha be loatra dia mety hahatonga anao hisotro ranon-javatra be loatra izay miteraka fanafody, miaraka amin'ny fihenjanana amin'ny tanana sy ny tongotra," hoy izy. "Afaka mitondra soritr'aretin'ny reraky ny asidra ihany koa izy ireo."
Inona no hitranga rehefa mivezivezy amin'ny fiaramanidina manokana
Toerana fandraisam-bahiny miavaka amin'ny fiaramanidina
#FlashbackFriday: The Lockheed L-1011 amin'ny 15 Photos
Inona no Travel Providers Ove mpandehandeha nafindra avy amin'ny toetrandro
Inona no safidinao rehefa misy mpamono olona?
SCOTTEVEST Review of Women's Lightweight Vest
Sarin'ny Nosy Alemana any Sylt
Fialam-boly nahafinaritra tany New England
Torohevitra ho an'ny alina manjo ny Halloween Horror ao amin'ny Universal Orlando
Fiarandalamby mandeha amin'ny fety mandritra ny taona
Ahoana ny fomba handefasana ny fahazoan-dàlan'ny mpamily iray any Georgia?
Concert ao Mozambika any Però amin'ny 2016
Sydney ho any Melbourne
Hotel Etiquette: Inona no azonao alaina?
Mitadiava mpiara-miaina amin'ny serivisy